Ke unokucima i-120 Hz ye-iPhone 13 Pro kwaye ugcine ibhetri | IPhone iindaba
Ke unokucima i-120 Hz ye-iPhone 13 Pro kwaye ugcine ibhetri
UMiguel Hernandez | | iPhone, iPhone 13, Iifowuni zePhone, Izifundo kunye neencwadana
I-iPhone 13 Pro kunye nohlobo lwayo "Max" longeze kwizikrini zabo itekhnoloji abasebenzisi ebebeyifuna kangangeminyaka, behlaziya amazinga alingana okanye angaphezulu kwe-120 Hz Ngale ndlela, bayalingana kweli candelo kwiifowuni ezininzi ze-Android ze Uluhlu olwahlukeneyo olunayo le nkqubo.
Nangona kunjalo, inkxalabo enkulu yabasebenzisi abaninzi malunga noku yayikukusetyenziswa kweebhetri, into i-Apple ibonakalise ukuba iqulethwe kangangokuba iimodeli ezintsha zisebenzisa ibhetri encinci kunaleyo ingenazo izikrini zeProMotion. Nangona kunjalo, Sikubonisa ukuba ungayicima njani i-120 Hz ProMotion ye-iPhone 13 Pro kwaye ugcine ibhetri engakumbi.
Sineefomula ezininzi zokuphumeza olu hlengahlengiso luya kusisindisa kakhulu, ngenxa yoko siza kukubonisa iindlela ezimbini eziphambili onokuzenza ngeendlela ezahlukeneyo, zilula kakhulu, ke ungaphoswa.
1 Khubaza ngokusisigxina iProMotion (120Hz)
2 Khubaza okwethutyana iProMotion (120Hz) ngemowudi yokugcina ibhetri
Khubaza ngokusisigxina iProMotion (120Hz)
Lo msebenzi ngandlel "ufihliwe" kwaye iya kusivumela ukuba siwusebenzise ngokusisigxina umsebenzi weProMotion, ubuncinci de siyisebenzise kwakhona, kufuneka ulandele le miyalelo ilandelayo.
Ngena iisetingi kwaye uye kwicandelo lokuFikelela
Ngaphakathi ukufikeleleka, jonga icandelo leNtshukumo kwaye ufake useto
Kukhetho lokugqibela, cima iswitshi ebonisa "ukunciphisa umda kwinqanaba lesakhelo"
Oku kuyakunciphisa ngokuzenzekelayo inqanaba lokuhlaziya ukuya kwi-60Hz ngokusisigxina, ngokungathi awunayo inqaku leProMotion.
Khubaza okwethutyana iProMotion (120Hz) ngemowudi yokugcina ibhetri
Olu khetho lwesibini lolona lulula kuzo zonke kwaye luya kuhlala lude lukhubaze kuphela. Sele uyazi ukuba ukusetyenziswa okuncinci okanye imo yokugcina ibhetri ye-iPhone kukwenza kungasebenzi ukusebenza okuthile ukugcina ibhetri, Kwaye kwenzeka kanye ngeProMotion yefowuni ye-iPhone. Ngelixa siqhuba imowudi yamandla asezantsi inqanaba lokuhlaziya liya kubanda kwi-60Hz.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ke unokucima i-120 Hz ye-iPhone 13 Pro kwaye ugcine ibhetri
Ngaba ayinakuba yenye indlela? Ukuba iyasebenza inikwe umda kuma-60 kodwa ukuba ayisebenzi iyasetyenziswa kuma-120, akunjalo? Ndiyayiqonda ukuba yosiwe ubuncinci. Kwam kukhubazekile ngokungagqibekanga ...
Omnye umbuzo endinawo ... Ngaba ayinakuba yenye indlela? Ukushiya "umda wenqanaba lesakhelo" ukhetho lwenziwe lwanciphisa umda wokuhlaziya kwesikrini ukuya kuma-60 ...
Andiqondi ukuba ndicime ziphi na izimvo zam xa ungathandabuzeki, endaweni yokuphendula, kodwa ke, ndicinga ukuba yenye indlela ejikeleze umda wokuhlaziya kwi-60hz.
Nantoni na oyibekayo, ayizukuvumela ukuba ndiyithumele njalo. Umsebenzi olungileyo kakhulu walowo ubhale isicatshulwa ebeka izinto ezingenangqondo kunye nezithintelayo, ngaphandle kokholo olubi, ekubeni kuphawulwe ngazo.
Akufanelekanga ukuba ukhetho luhlolwe ukunciphisa umda wokuhlaziya ukuya kwi-60hz kwaye ungakhange ukhangele njengoko isicatshulwa sisitsho?
UGoogle uhlamba ubuso bezicelo ze-iOS
I-Apple ibhengeza umcimbi wayo olandelayo 'ongafunekiyo' ngo-Okthobha u-18